Kuoma kweHupfumi Kwopa Kuti Vakawanda Varware neChirwere cheKuoma Mutezo
Nyazvi munyaya dzezvehutano dzinoti kuoma kuri kuita zvinhu munyika nenyaya yehupfumi hwenyika hwaenda kumawere kwave kupawo kuti vakawanda vanyanye kufunga zvinozoguma zvopa kuti vaome mutezo.
Vakuru vanoti mudzimu wakupa ronda wati nhudzi dzikudye, iyi ndiyo nhamo yoonekwa nevana veZimbabwe vakawanda nekuda kwenzara yapfunya chisero munyika, Vanhu vakawanda havana mabasa zvopa kuti ndangariro dzigare dziri kure vachizoguma varwara,
Mashoko aya anotsinhirwa nemukuru wesangano Community Working Group on Health VaItai Rusike rinova sangano rakazvimirira rinokurudzira hutano hwakanaka kuzvizvarwa zveZimbabwe. VaRusike vanoti pane ongororo iri kuratidza kuti chirwere chekuoma mutezo chavekukomba nenyaya yehurombo.
“Nekuda kwekuoma kwezvehupfumi mumakore angada kuita makumi maviri adarika tiri kuona kuti ruzhinji rwava kutambura nezvirwere zvataive tisina. Zvirwere zvekufunganya, anenge achifunga kuti nhasi tichadyei, mari yechikoro ndichaiwanepi akapedza chikoro basa anoriwanepi munhu otooma mutezo", vanodaro VaRusike.
vanoendererawo mberi vachiti, "Nyika yedu haisikunyatsokwanisa kubatsira vanhu vakadaro. Yarasikirwa navanachiremba navanamukoti vakawanda uye muzvipatara hamuna zvekushandisa zvakakwana.Vanhu varikuramba vachirasikirwa nepfuma yavo vamwe vototengesa mombe kuti vabhadhare kune vanobatsira. Vamwe vakutofamba nzendo dzakareba kuenda kune dzimwe nyika nekuti zveutano zvadzikira kuno. Dai hurumende yagadzirisa nyaya yezvehupfumi kuti vanhu vasanyanyekufunganya.”
Mumwe akawirwa nedambudziko rekuoma mutezo ndiAmai Lydia Takawira. Amai Takawira vanoti varikurarama hupenyu hunorwadza zvikuru mushure mekuoma mutezo huye vanoti nekuda kwenhamo yavari kuona havafungidziri kuti vachavanehutano hwakanaka nekuda kwepfungwa dzinovawandira mumusoro
“Ndakaoma mutezo kupera kwegore. Zvinhu zvandiomera zvakanyanya nekuti ndinoda mari ingatosvika kuzana ramadhora kaviri svondo roga roga. Mari iyi irikundinetsa kuiwana saka dzimwe nguva ndinoguma ndorega kuenda kunotasanurwa mitezo nekutoona kuti handingasiye mumba musina chokudyaMurume nemhuri yangu zvatovaomerawo zvakanyanya. Ndichirikuda rubatsiro nguva dzose."
Vanhu vanooma mitezo vanoda nyanzvi mukutasanudza mutezo huye vanachiremba ava kana vasiri pazvipatara zvehurumende vanodhuura zvakanyanya. Kutasamudzwa kamwe chete kunoda madhora aripakati pe makumi manomwe nezana ramadhora huye zvozoenderana kuti watora nguva yakadi kusvika wazogona kushandisa mitezo woga.”
Dr Andrew Mataruse ndeumwe wevanachiremba vanoshanda nevarwere vekuoma mutezo. VaMataruse vanoti zvichienzaniswa nakare, chirwere chekuoma mutezo ichi chatekeshera.
“Dambudziko rekuoma kwemitezo idambudziko rinokonzereswa kana tsinga dzisingakwanise kuendesa ropa kuuropi. BP ndiyo inonyanyo konzera dambudziko rekuoma kwemitezo. Kune zvimwewo zvirwere zvakadai sesugar neHIV zvavewo kukonzeresawo stroke. Tichitarisa kunana 1990 tinoona kuti dambudziko rakura zvakanyanya parizvino. Patsvakurudzo dzatakaita tinoona kuti ririkutosvika kunana 4 percent pakakura tichienzanisa nedzimwe nyika kana kare."
Dr Mataruse vanotiwo, "Pane maguta vanhu vanotanga kudyawo mari dzichiwanda zvichikonzera zvirwere zvakaita sana obesity. Totarisawo kuti kushayiwawo zvekare kunowanzawo chirwere nekuti mari yekunoongororwa inenge ichishayikwa.”
Sangano reCenters for Disease Control remuAmerica riinewo muzinda muZimbabwe rinoti vanhu kuti vadzivirire kubatwa nechirwere ichi vanofanira kudya zvinhu zvinovaka hutano sezvaidyiwa makare, vanofanirawo kusaita muviri wakakurisa uye vachiitawo zvekugwinyisa muviri kana kuti exercise. Vanhu vanosungirwawo kumira kusvuta fodya nekunwa doro.
Ko munhu anoziva sei kuti ave kuoma mutezo? Vana chiremba vanoti munhu anotanga kupera simba uye kunzwa chiveve kumeso, pagumbo, ruoko zvikuru kudivi rimwe chete remuviri.
Munhu anogonaw kutanga kusaziva zviri kuitika, kutadza kutaura, kana kunzwa, kutadza kuona zvakanaka, kutadza kufamba, kunzwa dzungu, kutemwa nemusoro zvakanyanya kana kufenda. Munhu anogona kufa nechirwere ichi akanonoka kuonekwa navanachiremba.
Nhepfenyuro yeStudio 7 haina kukwanisa kubata sangano restroke Association for Zimbabwe kuti tinzwe nezve huwandu hwevanhu varikuoma mitezo.